How'd it happen and more reports?: Indonesia ပါတိပ် မြန်မာလက်ကားဆိုင်
မြန်မာပြည်အပြန်လက်ဆောင်ပဲပေးပေး ကိုယ်တိုင်ဝတ်ဖို့ပဲ ၀ယ်ဝယ် စင်ကာပူမှာပါတိတ်တွေကို ဈေးပေါပေါနဲ့ ၀ယ်ယူနိုင်မယ့်နေရာ
205 Henderson road. ပါတိတ် ဒိုင်ဖြစ်ပါသည်။ လက်လီလက်ကား ၀ယ်ယူနိုင်သည်။ ဂိုဒေါင်ဖြစ်သဖြင့် ဂိုတောင်ပုံစံသာ တွေ့နိုင်မည်။ ပထမထပ်တွင်ရှိပါသည်။ စားသောက်ဆိုင် ဘေးက ကုန်လျောမှတက်ပါ။ ညာဘက် သို့ သွားပါ။ မြန်မာမင်းသမီး ပါတိတ် poster များ ကပ်ထားသော တံခါးကို တွေ့ပါမည်။ စနေနေ့ နေ့ဝက်သာ ဖွင့် ပါသည်။ ဂိုတောင် အတွင်း Photo ရှာတွေ့ရင် တင်ပေးပါမည်။
205 Henderson Industrial Park.
MRT နဲ့ မနီးပါဘူး ။ အနီးဆုံး MRT က Tiong Bahru Mrt လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ Bukit Merah Bus Interchange နဲ့ နီးပါတယ်။
Posted by Ko Nge at Saturday, August 22, 2015